गर्भावस्थामा ख्याल राख्नैपर्ने केही कुराहरु – जुगल टाईम्स
गर्भावस्था आफैमा एक संवेदनशिल अवस्था हो । यतिबेला गर्भवतीमा केही शारीरिक र मानसिक परिवर्तन देखिन्छ । त्यसैले यसबेला गर्भवतीले आफ्नो स्वास्थ्यमा बढी नै ख्याल राख्नुपर्छ । गर्भवती मात्र होइन, उनका श्रीमान र परिवारमा यो जिम्मेवारी अरु बढी हुन्छ ।
त्यसैले गर्भवतीका लागि घरको माहौल कस्तो बनाउने ? पारिवारिक वातावरण कस्तो बनाउने ? गर्भवतीलाई कसरी खुसी र निर्धक्क राख्ने भन्ने कुरामा परिवारका सदस्यहरुले सोच्नुपर्छ । साथै गर्भावस्था’bout विभिन्न भ्रम छन्, त्यस्ता भ्रमको पछि लाग्नु हुँदैन ।
जबकी स्तन भारी हुनु, कुनै काम नगरे पनि थकान महसुस हुनु पनि गर्भावस्थाको लक्षण हो । यसबाहेक पनि, गर्भावस्थाका अन्य थुप्रै प्रारम्भिक लक्षण छन्, जस’bout ध्यान दिएर पनि महिलाहरुले आफू गर्भवती भए, नभएको सजिलै थाहा पाउन सक्छन् ।
गल्ती के हुन्छ भने, अक्सर दम्पती पारिवारिक जीवनमा राम्ररी एडजस्ट नहुँदै बच्चा जन्माउने तयारी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा दम्पतीबीच मनमुटाव, ठाकठुक पर्छ । उनीहरु भनाभन गर्छन्, झै–झगडा गर्छन् । यसको सोझो प्रभाव गर्भको बच्चालाई पर्छ ।
गर्भवतीको स्वास्थ्यसँग गर्भमा हुर्कने बच्चाको स्वास्थ्यको गहिरो प्रभाव रहनछ । साथै गर्भवतीको सोंच–चिन्तनले पनि गर्भको बच्चामा प्रभाव पार्छ । यो तथ्यलाई बुझेर श्रीमान् तथा उनका घर परिवारले यस्तो माहौल तयार गरिदिनुपर्छ, जहाँ गर्भवतीले उन्मुक्त रमाउन सकोस् । सधै खुसी र शान्त रहन सकोस् ।
गर्भवती तनावरहित हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान, प्राणायाम जस्ता विधी पनि उपयोगी हुन्छ । यसका लागि श्रीमानले प्रेरित गर्न सक्छन् । गर्भावस्थामा गरिने केही योग आसन र व्यायाम हुन्छन् । नियमित व्यायामले गर्भवतीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउँछ । यसका साथै खानपान पनि स्वस्थ्य, सन्तुलित, पोषकयुक्त हुनुपर्छ । अप्राकृतिक खानेकुराबाट बच्नुपर्छ । पर्याप्त पानी पिउने, आरम गर्ने, गहिरो निद्रा लिने जस्ता कार्यले पनि गर्भवतीको स्वस्थ्य राम्रो हुन्छ ।
सैंद्धान्तिक रुपमा ध्वनीको प्रभाव एकाग्रता, निन्द्रा, मानसिक विकास तथा भाषिक क्षमतामा विकाश गराउनेमा हुन्छ । ताइवानको कलेज अफ नर्सिङ, कौसियुङ मडिकल युनिर्भसिटीले २३६ गर्भवती महिलाहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसार गर्भवस्थामा दुई हप्ता मात्र पनि संगीत सुन्नाले गर्भवती महिलाहरुलाई तनाव मुक्त बनाउन मद्दत ग¥यो ।
गर्भावस्थामा संगीत सुन्ने नया प्रयोग चाहि होइन । थाहा भएर वा नभएर पनि गर्भावस्थामा भजन तथा विभिन्न किसिमका मेलोडिहरु सुन्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा पहिले देखि नै रहेको छ ।
विकसित मुलुकहरुमा सन १९९० तिर देखी नै गर्भको बच्चाका लागी गर्भवतीहरुले “ओम्व म्युजिक” अर्थात गर्भ संगीत सुन्ने गरेको पाईएको छ । समान्यतयाः गर्भको बच्चा ५ महिना भईसकेपछि, उनको सुन्ने शक्तिको विकास भई सकेको हुन्छ । त्यसैले गर्भको भ्रुणले पनि २० हप्ताको अवधी पछि संगीत सुन्न सक्ने अनुमान विज्ञहरुको रहेको छ ।
गर्भावस्थमा कतिपय शारीरिक परिवर्तन हुन्छन् । यद्यपि ति सबै किसिमका परिवर्तन सामान्य नहुन सक्छ । त्यसैले गर्भावस्थाका शारीरिक परिवर्तन कुन किसिमको हो ? सामान्य वा जटिल ? बुझ्नुपर्छ ।
गर्भावस्थामा अत्याधिक वान्ता हुनु, वान्ताका कारण शरिर निकै कमजोर हुनु वा थप समस्या देखापर्नु तथा यसको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थालाई हाइपरईमेसिस् ग्राभिडम् भनिन्छ । हाईपरईमेसिस ग्राभिडम प्रायः पहिलो पटकको गर्भमा बढि भएको पाईन्छ । गर्भमा एक भन्दा बढी शिशु अर्थात जुम्लिया गर्भ रहेमा तथा अव्यवस्थित गर्भ रहेमा पनि वान्ता बढि हुने गरेको देखिन्छ ।
एच.सि.जि. हर्मोन बढ्ने कारणहरु धेरै हुन्छन् र कति अवस्थामा यो हर्मोन बढ्नुको कारण पता लगाउन पनि सकिदैन । यस बाहेक भिटामिन वी वा प्राटिनको कमी हुनु तथा मानसिक तनावहरुले हाइपरईमेसिस् ग्राभिडम् गराउन सक्छन । गर्भावस्थामा पनि अन्य अवस्थाको जस्तै बिभिन्न रोगहरु जस्तै पिसाबको संझमण, पेटको अल्सर एपेन्डिसाइटिस, पित्त थैलीको संक्रमण, कलेजको संक्रमण आदिले वान्ता गराउन सक्छ । गर्भावस्थामा अनि त्यसमा पनि पहिलो तिन महिना खानामा बिशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ ।
खान मन न लाग्नु अनि वाकवाक लाग्ने भएर नि खानामा बिचार गर्नु पर्छ । मौसम अनुसारको फलफुल, दहि, ड्रायफ्रट्स (काजु,पिष्ता,बदाम), माछामासु, अण्डा र पानी प्रसष्त खानुपर्छ । सादा पानी नरुचेको अवस्थामा कागती, ग्लुकोज वा अन्य जुसहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । अलिअलि वान्ता भएर आत्तिनु हुदैन तर समान्य भन्दा बढि वान्ता भएमा तुरुन्त डाक्टरसंग सम्पर्क गर्नु पर्छ ।
Posted on २१ बैशाख २०७७, आईतवार १०:२३ Author जुगल टाईम्स
पूर्वी नवलपरासीमा शनिबार राति जंगली च्याउ खाँदा एकै ७ जना बिरामी परेका छन् । उनीहरु मध्ये ३ जनाको अवस्था सामान्य रहेकोले उपचार पछि घर फर्किएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनबहादु खाँणका अनुसार विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-४ सानो सिद्रे निवासी १८ वर्षीय पुरुषोत्तम भण्डारी, २३ वर्षीय सुनिता भण्डारी, ११ वर्षीया पुनम भण्डारी […]